Politika momba ny tsiambaratelo - YTpals
Ity Politika momba ny tsiambaratelo ity dia mifehy ny fomba fanangonana, fampiasana, fikojakojana ary famoahana ny vaovao angonina avy amin'ireo mpampiasa (tsirairay avy, "Mpampiasa") iray amin'ny tranokala https://www.ytpals.com ("Site"). Ity politika manokana ity dia mihatra amin'ny tranokala sy ny vokatra sy serivisy rehetra atolotry ny YTpals.
Azontsika atao ny manangona fampahalalana momba ny mombamomba anay manokana amin'ny mpampiasa amin'ny fomba isan-karazany, ao anatin'izany, fa tsy ferana, rehefa mitsidika ny tranokalanay ny mpampiasa, misoratra anarana amin'ilay tranokala, mametraka baiko, misoratra anarana amin'ny gazety, mameno endrika, ary mifandraika amin'ny hetsika hafa, serivisy, fiasa na loharano hafa izay ampiasainay amin'ny tranokalanay. Mety angatahina ny mpampiasa, raha ilaina, anarana, adiresy mailaka, adiresy mailaka. Tsy manangona fampahalalana momba ny carte de crédit izahay. Na izany aza, ny mpampiasa dia afaka mitsidika ny tranokalanay tsy mitonona anarana. Hanangona ny mombamomba ny mombamomba anay manokana avy amin'ny mpampiasa izahay raha toa ka manolotra an-tsitrapo izany fampahalalana izany aminay. Ny mpampiasa dia afaka mandà tsy hanome fampahalalana momba ny tena manokana, afa-tsy ny manakana azy ireo tsy hanao hetsika sasany mifandraika amin'ny tranokala.
YTpals dia mety manangona sy mampiasa ny mombamomba anao manokana ho an'ireo mpampiasa manaraka:
- Mba hanatsarana ny serivisy ho an'ny mpanjifa: ny fampahalalana omenao dia manampy anay hamaly ny fangatahan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa sy ny filàny ilaina tsara kokoa.
- Hanatsarana ny tranokalanay: Afaka mampiasa tamberina omenao izahay hanatsarana ny vokatra sy serivisinay.
- Mba hanaovana fampiroboroboana, fifaninanana, fanadihadiana na endri-javatra amin'ny tranokala hafa: handefasana ny fampahalalana ho an'ireo mpampiasa izay neken'izy ireo horaisina momba ny lohahevitra heverinay fa hahaliana azy ireo.
- Mandefa mailaka maharitra: Afaka mampiasa ny adiresy mailaka izahay handefasana ny mombamomba ny mpampiasa sy ny fanavaozana mifandraika amin'ny filaharany. Azo ampiasaina ihany koa izy io hamaliana ny fanontaniany, ny fanontaniany ary / na ny fangatahana hafa. Raha manapa-kevitra ny hiditra ao amin'ny lisitry ny mailaka ny mpampiasa dia handray mailaka izay mety misy ny vaovaon'ny orinasa, ny fanavaozana, ny vokatra mifandraika na ny fampahalalana momba ny serivisy, sns. esory ny torolàlana eo amin'ny farany ambanin'ny mailaka tsirairay.
Ny fifanakalozana data saro-pady sy tsy miankina manelanelana ny tranokala sy ny mpampiasa azy dia mitranga amin'ny fantsom-pifandraisana azo antoka SSL ary voahidy sy arovana amin'ny sonia nomerika.
YTpals dia manam-pahendrena hanavao ity politika tsiambaratelo ity amin'ny fotoana rehetra. Rehefa manao izany izahay dia hamerina hijery ny daty nohavaozina eo amin'ny faran'ity pejy ity. Manentana ny mpampiasa izahay hijery matetika ity pejy ity raha misy fiovana hahalalàna ny vaovao momba ny fomba anampiantsika amin'ny fiarovana ireo mombamomba anay manokana. Manaiky ianao ary manaiky fa anjaranao ny mandinika io politikan'ny tsiambaratelo io indraindray ary mahafantatra ny fanovana.
-Pampiasana ho Site, ianao midika ny fanekentsika io politika. Raha tsy manaiky ny politika ity, masìna ianao, aza mampiasa ny Site. Ny mbola mampiasa ny Site manaraka ny fandefasana ny fanovana politika io dia ho hita fa ny fanekena ny fiovana ireo.
Nohavaozina farany tamin'ny 22 Janoary 2019 ity antontan-taratasy ity